Three People (2015) - IMDb
Watatu, made by Kenya's leading arts for social change organization - SAFE Kenya - examines the rise of radicalization amongst young Muslims in Mombasa. Part drama, part documentary, this fo... Read allWatatu, made by Kenya's leading arts for social change organization - SAFE Kenya - examines the rise of radicalization amongst young Muslims in Mombasa. Part drama, part documentary, this forum film provides audiences around Mombasa the chance to change the outcome of the story.Watatu, made by Kenya's leading arts for social change organization - SAFE Kenya - examines the rise of radicalization amongst young Muslims in Mombasa. Part drama, part documentary, this forum film provides audiences around Mombasa the chance to change the outcome of the story.
Watatu, made by Kenya's leading arts for social change organization - SAFE Kenya - examines the rise of radicalization amongst young Muslims in Mombasa. Part drama, part documentary, this forum film provides audiences around Mombasa the chance to change the outcome of the story.
June 2015 (Kenya)